Ameerikaafi Sudaan ’tarree shorokessummaa keessaa bahuurratti mari’atan’ - BBC News Afaan Oromoo
Ameerikaafi Sudaan ’tarree shorokessummaa keessaa bahuurratti mari’atan’
Madda suuraa, Sudan government
Waggota 15 keessatti Ministirri Dhimma Alaa US Ameerikaa yoo daawwatu kuni kan duraati
Ministirri Muummee Sudaan Abdallaa Hamdok akkaataa Ameerikaan tarree biyyoota shororkeessummaa tumsan/gargaaran keessaa Sudaan haqxurratti Ministira dantaa alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo wajjin mariyatan.
Maayiik Poompiyoon qondaalaa olaanaa Ameerikaa waggaa 15 keessatti yeroo jalqabaaf Sudaan daawwataniidha.
Kana malees pirezedantiin duraanii Sudaan Omar al-Bashiir erga aangoorra buufamanii qondaala Ameerikaa Sudaan yeroo duraaf daawwatanidha.
Sudaan galmee shororkeessummaa Ameerikaan tarreeffatte keessaa baafamu/haqamuu barbaaddi, Ameerikaan immoo hariiroo biyyoonni Arabootaa Israa’el wajjiin qaban wayyeessuu barbaaddi.
Kana malees, Sudaan qoqqobbii Ameerikaan sababa kanaaf irra keessee akka kaaftu barbaaddi.
Ameerikaan Sudaaniin erga bara 1990 keessa eegale tarree biyyoota shorrkeessuummaa deeggaruun himataman kanneen akka Kooriyaa Kaabaa, Iraanii fi Sooriyaa jalatti ramadde.
Bara 1990 keessa hogganaan al-Qayiidaa Osaamaa Binlaadiin keessummaa pirezidantiin duraanii Sudaan Omar al-Bashiir ta'un Sudaanitti afferamee jiraate.
Erga Omaar al-Bashiir erga aangoorraa bu’ee hariiroon Sudaan Ameerikaa wajjin qabdus wayyaa’eera.
Ministirri Muummee Sudaan Abdallaa Haamdok dinagdeen qoqqobamuun goolabamee, Sudaan sirna faayinaansii idila-addunyaa keessa seentee sharafa doolaraa Ameerikaas argachuun investimeentii fi liqii haawwachuu akka barbaaddu dubbatan.
Haal dureen Ameerikaan Sudaan tarree shororkeessuummaa keessaa haquuf baaftemmoo, bara 2000 tti maatii namoota 17 doonii Ameerikaa ‘USS Cole’jedhamtu keessatti haleellaa al-Qaayidaatiin buufata doonii Yamanitti ajjeefamaniif beenyaa/gumaa akka kaffaltu gaafatte.
Kanasa, Sudaan ji’a Guraandhala darbe kaffaluuf waada seente ture.
Hariiroo Israa’eliifi Arabootaa
Ministirri dantaa alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon xiyyaaraan Israa’eel Tel Aviiv irraan ka’uun wayita Sudaan seenan, Imbaasiin Ameerikaa Jeerusaalem jiru ‘’imala seena qabeessa’’ jedheen.
Maayiik Poompiyoon hariiroo Israa’el biyyoota Araboota kanneen akka Baahireen, Sudaan fi UAE wajjiin qabdu cimsuurratti fuulleeffatan.
Inumaa balalii kallattiin Israa'el irraa gara Sudaan imaluu isaanii akka walitti dhufeenya Sudaaniifi Israa'el fooyya'aa jirutti fudhatan.
Bishaan hidha keessatti walitti qabame bara dhufu ‘annisaa maddisiisa’
Wayita Israa’el keessa turanitti, biyyoonni Araboota hafaniis hariiroo nageenya Israa’el wajjin akka uumaan waamicha dhiyeessan.
Qooda jaarsummaa pirezidant Tiraamp hariiroo UAE fi Israa’el ji’a darbe fooyyessuun, waliigalteerraa akka qaqqabaniif gumaachan akka fakkeenyaatti eeran Poompiyoon.
Waliigateen nageenyaa kun biyyaa Arabaa fi Israa’elii gidduutti yeroo sadii qofaaf mallatteefame.
Ministirri Muummee Israa’el Beenyamiin Neetanaahon, dhiyeenya ‘’tarii oduu gammachuu dhaga’uu jirra’’ jedhanii waliigaltee kana ilaalchisuun wayita dubbatanii turan.
Qondaaltoonni Ameerikaa waliigateen walfakkaatu Israa’elifi biyyoota Arabootaa akka Oomaan, Bahareenii fi Sudaan gidduutti akka mallatteeffamu abdii qabaachuu dubbataa turan.
Hariiroo US fi Sudaan
Haleellaa imbaasii Ameerikaa Keeniyaa fi Taanzaaniyaa keessa jiran al-Qaayidaan qaqqabsiisef mootummaan Ameerikaa Sudaan himata ture.
Sababa kanaafi kaaniif, walitti dhufeenyi Ameerikaafi Sudaan yeroo dheeraaf laafee ture. Haa ta'u malee, aangoorraa buufamu al-Bashir booda waan cimaa jiru fakkaata.
Yunivarsitii Keel Ingilaand argamutti seera kan barsiisaniifi dhimma Gaanfa Afrikaa itti dhiheenyaan hordofuu kan himan Awwal Aloo (PhD), lamaanuu walitti dhufeenya cimsuuf fedhii qabu jedha.
Kanaaf, Sudaan waan Ameerikaan gaafattu hunda raawwata turte jedha. Isaan keessa tokko al-Bashiir mana murtii ICC dhiyeessuudha, mana murtiitti idila addunyaatti dhiyeessuu Sudaan fudhatteetti jechuun hima.
MM Abiyyiifi Pompewoon wal arguu maluu?
MM Abiy Ahimadiifi Maayik Poompewoo
Gama kaaniin, Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad daawwannaa hojiif Kibxata ganama gara Sudaan qajeelaniiru.
MM Abiy turtii isaanii Kaartuum ammaatiin pireezidantii mana maree walabummaa Sudaan Jeneraal Abdulfattaa al-Burhaan akkasumas MM biyyattii Abdallaa Hamdook waliin akka mari'atan eegama.
Haa ta'u malee, Awwal Aloon Maayik Poompewoon gara Sudaan yoo imalan Ministirri Muummee Abiy Ahimadis Kaartum dhaquun isaanii saganteeffametu raawwatame yaada jedhu qaba.
Dhimma wal arguu isaaniirratti hanga yoonaa gama mootummaa Itoophiyaas ta'e gama Ameerikaa waan ibsame hin jiru.
MM Abiy yoo Poompiyoo wajjiin wal argan qabxiileen ijoo haasaa isaanii hidha haaromsaa Itoophiyaa fi dhimma 'dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa' jiruuti jedhame akka eegamu hima.
Torban darbe miseensoonni kongirasi Ameerikaa 20 ol haala Itoophiyaa keessa adeemaa jiru irratti ministeera dantaa alaa Ameerikaaf xalayaa barreessuun isaanii gabaafameera.
Kanaaf, dubbii kana kaasuu hin oolani jechuun xiinxala.
Gama kaaniin, kana dura Ameerikaan dhimma hidha haaroomsaarratti Masrii, Itooophiyaa fi Sudaan waliitti waliigalchiisuuf yaalte Itoophiyaan fudhachuu diddee turte.
Itoophiyaan hin fudhattu taanaan, Ameerikaan tarkaanfii akka qoqqobbii dinagdee fudhachuu akka dandeessuu dhiyeenya hima jirti jechuun Itoophiyaan waligalticha akka fudhattu dhiibbaa uumufi yaada jedhu kaasa.
Pirezidanti Tiraamp dhimma dantaa alaa Ameerikarratti waan jabaa otoo hin hojjannee filannoo pirezedantummatti dhiyaachuu waan jiraniif, dhimma hidha haaromsaas akka hojiiwwan dantaa alaarratti hojii hojjatamaniitti akka lakka'amuuf barbaadu jedha Awwal.
Hidha Abbayyaa: Bishaan hidha keessatti walitti qabame bara dhufu ‘annisaa maddisiisa’
6 Caamsaa 2020
Yeroo dhuma kan haaromfame: 20 Guraandhala 2019